မြောက်ဦးက စစ်ရှောင်စခန်း ပစ်ခတ်မှုအတွင်း သေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိလာ
မြောက်ဦးက စစ်ရှောင်စခန်း ပစ်ခတ်မှုအတွင်း သေဆုံးသူ...
15 มี.ค. 2563 - 13:24 น.
တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ စစ်တွေဆေးရုံကို့ ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ လူနာ သုံးဦးလုံး သေဆုံးသွားပြီလို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ မြောက်ဦးမြို့နယ်နဲ့ ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းမ်းမပေါ်မှာ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် အရပ်သား ၃၀ နီးပါး ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပစ်ခတ်မှုအတွင်း ကျောက်တော်မြို့နယ် သရက်တစ်ပင် သိန်းတန်ရွာက ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် ဗူးရွက်မညှိုးရွာက ဒေါ်သန်းအေးကြည်နဲ့ နောက်ထပ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး စုစုပေါင်း သုံးဦးတို့ဟာ ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေကြောင့် စစ်တွေဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ခဲ့ရတာပါ။
အခုတော့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦးနဲ့ ဒေါ်သန်းအေးကြည်တို့က မတ်လ ၁၄ ရက်မှာ သေဆုံးခဲ့ပြီး မနှင်းမိုးနွယ်ကတော့ ဒီကနေ့မတ်လ ၁၅ ရက်မနက်မှာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်ရင်း လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီး မိသားတစ်စုလုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ မနှင်းမိုးနွယ်ရဲ့ ဖခင်က အခုလို ဒုက္ခသည်စခန်းကို ပစ်ခတ်ခဲ့အတွက် မိသားစုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာကို ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ တရားစွဲချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"စစ်သားတွေက မနက်အစောကြီး အဝေးကြီးကနေ ကားတွေနဲ့ ပစ်ပြီး လာတယ်။ သူတို့ပစ်တဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့က အိပ်ယာက လန့်ပြီးနိုးလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ခန်းပေါ်ကဆင်းပြီး အောက်မှာ ပြားပြားမှောက်ပြီးတော့ ဝပ်နေကြတာပါ။ သူတို့လက်နက်ကြီးက အဝေးကနေပြီးလှမ်းပစ်လိုက်တော့ အိမ်ထဲကို တစ်ခါတည်း ခေါင်မိုးဖောက်ပြီးတော့ ဝင်လာတယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုငါးယောက် လက်နက်ကြီးကျည်စတွေ ထိမှန်သွားတယ်။ ကားရပ်ပြီးတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းတည့်တည့်ကို နာရီဝက်လောက် ပစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်သမီးလေးမှာ ဒစ်ရာတွေက ချက်နားကတစ်ချက်၊ ခါးမှာတစ်ချက်။ ဒဏ်ရာကနှစ်ချက်ထိပါတယ်။ သမီးလေးအခြေနေက သတိရတချက်၊ မရတချက်၊ မှတ်သလိုမမှတ်သလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ မကျေနပ်ဘူး။ တရားစွဲချင်တယ် အကုန်လုံးကို"လို့ သေဆုံးသူ မနှင်းမိုးနွယ်ရဲ့ဖခင်က ပြောပါတယ်။
ကျောက်တော်ဒေသခံ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦးကလည်း အဲဒီလိုပစ်ခတ်သံတွေကြားလို့ သူ့ညီမဖြစ်သူအတွက် စိုးရိမ်ပြီး သူ့ညီမအိမ်ကို အသွားမှာ ကျည်ထိတယ် သတင်းကြားလို့ လိုက်သွားတော့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဗုံးခိုကျင်းထဲ သတိလစ်လျက်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦးရဲ့ လူနာစောင့် ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက ပြော ပါတယ်။
"သူကျွန်မနဲ့အိပ်တာပါ။ ခါတိုင်းဆိုရင် ၇ နာရီလောက်မှ ထကြတာပါ။ ဒီနေ့ ၆ နာရီလောက်မှာ မြောက်ဦးဘက်က ပစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူ ကမြောက်ဦးဘက်ကို ဖုန်းဆက်မေးပြီး သူ့ညီမ မုန့်တီရောင်းထွက်မှာစိုးရိမ်ပြီး ပြေးသွားတယ်။ ကျည်ဆံထိတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မတို့လိုက်သွားတော့ သူသတိ မရတော့ဘူး။ ဗုံးခိုကျင်းထဲမှာပါ။ အိမ်ခေါင်မိုးတွေ လုံးဝပွင့်ထွက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ အခင်းပျဉ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ သူတို့ရှိတာကို လာထိတာပါ။ သူ့မှာ အမေရော၊ မတ်ရော ဒဏ်ရာရတယ်။ သူ့မတ်က သိပ်မစိုးရိမ်ရဘူး။ အမေ ကဒဏ်ရာပြင်းတယ်။ လက်မောင်းနဲ့ တင်ပါးမှာထိတယ်။ တိုက်ပွဲ မဖြစ်ဘူး။ မြောက်ဦးကနေ ပစ်တာပါ။ လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အားလုံး။ အဲ့ဒီက ကျောက်တော်က ဆရာဝန်ကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဦးနှောက် မှာထိသွားတယ်။ အသက်စိုးရိမ်ရတယ်တဲ့။ စစ်တွေကိုတောင် ယူခွင့်မပေးတော့ဘူး။ ကျွန်မတို့က သူ့ကံတရားပဲဆိုပြီး အတင်းယူလာတာပါ" လို့ ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးတွင်းကာလကလည်း အဲ့ဒီတိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ ဆေးရုံကို တပ်မတော်က ဝင်ရောက်ရှာဖွေမှု တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွက် စခန်းအတွင်းမှာ ရှိနေသူတွေနဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရသူတွေ အပါအဝင် လူနာစောင့်တွေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရဖူးပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ ဆေးရုံကိုပစ်ခတ်တာဟာ ပြည်သူတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းနဲ့ အခုဖြစ်စဉ်မှာ အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဒါတွေကိုညှိနိုင်းပေးဖို့လိုအပ်ပြီး ပြည်သူတွေ ဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာကို သိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြောက်ဦးက စစ်ရှောင်စခန်း ပစ်ခတ်မှုအတွင်း သေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိလာ